iOS နှင့် Android တွင်ပြင်ပအက်ပ်များမပါသည့်သီချင်း၏အနုပညာရှင်နှင့်အကြောင်းအရာကိုမည်သို့မြင်ရမည်နည်း Gadget သတင်း
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်၎င်းတို့အားနားထောင်စဉ်တတိယပါတီအက်ပလီကေးရှင်းများမှတေးဂီတနှင့်အနုပညာကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်အသုံးပြုကြသော်လည်းတတိယပါတီအက်ပလီကေးရှင်းများကိုအသုံးမပြုဘဲယင်းကိုလုပ်ရန်ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းရှိသည်။ ၎င်းသည်အံ့သြစရာကောင်းပြီးအသစ်လည်းမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များတွင်ဤ option ကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာရရှိနိုင်ပါပြီ၊ သင့်ကိုသဲလွန်စပေးရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ပိုင်အရွယ်နှင့်နီးနေပြီဟုသင့်အားပြောပြလိမ့်မည် iOS နဲ့ Android wizards.
ယခင်လမ်းကြောင်းအတိုင်းလူများစွာသည်ဖြေရှင်းချက်ကိုသေချာပေါက်နီးပါးသိနှင့်ပြီးဖြစ်သည်။ သင်၏စမတ်ဖုန်းဖြင့်ထိုအခိုက်အတန့်တွင်တီးခတ်နေသည့်သီချင်းနှင့်အနုပညာရှင်ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်ဤနည်းလမ်းကိုသင်အသုံးပြုပြီးသားများဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်ဤရရှိနိုင်သည့်ရွေးစရာကိုမသိသေးသောသုံးစွဲသူများစွာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ , တပ်ဆင်ရန်မလိုအပ်ပါ မည်သည့် third-party app ကိုမှ။ ယုတ္တိနည်းအရဤလုပ်ဆောင်မှုကိုပြုလုပ်ရန်သင်ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုလိုအပ်သည်၊ သို့သော်ယနေ့စမတ်ဖုန်းကိုင်သူအားလုံးနီးပါးတွင်ထိုအရာရှိသည်။
1 iOS တွင်သီချင်းတစ်ပုဒ်၏အနုပညာရှင်နှင့်အကြောင်းအရာကိုမည်သို့မြင်ရမည်နည်း
2 Android တွင်သီချင်းတစ်ပုဒ်၏အနုပညာရှင်နှင့်အကြောင်းအရာကိုမည်သို့မြင်ရမည်နည်း
3 Third-party apps များသည်ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်သော်လည်းမလိုအပ်ပါ
အဆင့်များသည်ရိုးရှင်းသော်လည်းသင်သိရန်လိုအပ်သည်မှာထင်ရှားပါသည်။ ပထမ ဦး ဆုံးသိရတာကအဲဒါတိုက်ရိုက်၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အသံဖြင့် ဘယ်သီချင်းကိုဖွင့်နေတယ်၊ ​​အနုပညာရှင်နဲ့အခြားဒေတာတွေကိုသိနိုင်တယ်။
၎င်းသည်လွယ်ကူပြီးမြန်ဆန်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ပထမ ဦး ဆုံးလုပ်ရမှာက iPhone, iPad, iPod Touch နှင့် Mac တို့၏ Siri လက်ထောက်ကိုတိုက်ရိုက်ခေါ်ယူခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်မေးခွန်းထုတ်ရန်ရှိသည်။ ဘာသီချင်းလဲ? ၎င်းသည်တုန့်ပြန်လိမ့်မည် - «ခွင့်ပြုပါအုံး ... » ထိုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိရိယာကိုတေးဂီတဖွင့်နေသောစပီကာ (သို့) နေရာနှင့်အနည်းငယ်နီးကပ်လာစေပြီးစက္ကန့်အနည်းငယ်အကြာတွင်သီချင်းနှင့်၎င်းကိုရေးသားသူကိုခွဲခြားသိမြင်နိုင်သည်။
Apple Siri လက်ထောက်ဖြစ်သူတွင် Shazam application မှကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အဆိုတော်၏နာမည်နှင့်အဓိကဆောင်ပုဒ်ကိုပေးရုံသာမကသီချင်းများကို ၀ ယ်နိုင်ခြင်းသို့မဟုတ် ၄ င်း၏လွင့်ထုတ်လွှင့်သည့်ဂီတ ၀ န်ဆောင်မှုမှတိုက်ရိုက်နားထောင်နိူင်သည်။ Apple ကဂီတ။ သတိရရမည့်အချက်တစ်ခုမှာအထက်ပုံရိပ်ဖမ်းယူမှုတွင်ယုတ္တိနည်းအရပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားသည်။ ဦး စွာ Siri ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးနောက်သူသည်ဒေတာကိုနားထောင်ပြီးကမ်းလှမ်းသည်။ ၎င်းသည်အခြားတစ်လမ်းဖြစ်သောကြောင့်ဖမ်းယူမှုများ၏အစီအစဉ်ကိုမကြည့်ပါနှင့်။
အခု iPhone, iPad မှာ iOS နဲ့လုပ်သလို Android Device တစ်ခုလိုပဲလုပ်တော့မယ်။ အမှန်မှာ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ပြုသကဲ့သို့အတူတူပင်ဖြစ်သော်လည်းအသံလက်ဆောင်မှတစ်ဆင့် Google assistant ကိုအသုံးပြုသည်။ok ကို Google«။ wizard ကိုအသုံးပြုသည်နှင့်တပြိုင်နက် iOS တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည့်ထပ်တူမေးခွန်းကိုမေးရမည်ဖြစ်သည်။
ဂူဂဲလ်လက်ထောက်တွင်သင်တွေ့နိုင်သည်မှာကျွန်ုပ်တို့တွင်ဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲ၊ ဂီတနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အမျိုးအစားနှင့်အောက်ခြေကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်အလွယ်တကူမျှဝေနိုင်သည်။ စနစ်နှစ်ခုလုံးသည်မြန်နှုန်းနှင့်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းကိုရရှိနိုင်သည့် application များစွာအတွက်ဖြစ်သည် ဂီတကိုခွဲခြားသတ်မှတ် ငါတို့မှာမရှိ။ ဤသည်မှာသီချင်းတစ်ပုဒ်နှင့်အနုပညာရှင်တစ် ဦး ကိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းပြီးရိုးရှင်းသောနည်းဖြင့်သိရန်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်သည်။
Third-party apps များသည်ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်သော်လည်းမလိုအပ်ပါ
ကျနော်တို့၏တည်ရှိမှုကိုငါသိ၏ Third-party applications များ ဒီဟာကဒီအလုပ်ကိုလုပ်နိုင်တယ်၊ Apple ဒါမှမဟုတ် Google ရဲ့လက်ထောက်ကပေးတဲ့ရွေးစရာတွေကိုတောင်ပိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ကိစ္စအားလုံးနီးပါးမှာလက်ထောက်ကိုအဲဒီအခိုက်မှာဘာသီချင်းနဲ့ဘယ်သီချင်းဖွင့်သလဲဆိုတာကိုတိုက်ရိုက်မေးမြန်းတာကပိုမြန်တယ်။ သတင်းအချက်အလက်ကကမ်းလှမ်းခဲ့သည်ကြီးလှ၏။ ငါပြောသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့သီချင်းအချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့၏အကြိုက်ဆုံးဂီတ ၀ န်ဆောင်မှုသို့တိုက်ရိုက်ဖွင့်ရန်အခွင့်အလမ်းမရှိ။ အချို့အက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်လုပ်နိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်အသုံးပြုသူများအတွက်အနည်းဆုံးဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်ဤနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောကောင်းသောအရာ ရိုးရှင်းမြန်ဆန် အဲဒါကလူတိုင်းကိုစမတ်ဖုန်းမှာ application တွေကို download လုပ်စရာမလိုဘဲဘယ်နေရာမှာမဆိုသီချင်းဖွင့်နေတာကိုကြည့်ဖို့လူတိုင်းကိုဖြစ်နိုင်ခြေကိုပေးတယ်။ အဆိုပါ wizards ကွန်ပျူတာများကိုမူလကထည့်သွင်းထားပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီအလုပ်တွေအတွက်သာမကအခြားသူတွေအတွက်လည်းလွယ်ကူပါတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » လဲ tutorial » iOS နှင့် Android တွင်ပြင်ပအက်ပလီကေးရှင်းများမပါဘဲသီချင်း၏အနုပညာရှင်နှင့်အကြောင်းအရာကိုမည်သို့မြင်ရမည်နည်း
ဥရောပမှတရားဝင် Black Shark3နှင့် Black Shark3Pro တို့သည် ၄ ​​င်းတို့၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်စျေးနှုန်းများဖြစ်သည်